Seeraar, waa maxay, sida ay u shaqeyso iyo meesha laga iibsado Bitcoins | War gadget
Waxaan maqalnay Bitcoins dhowr sano, kaliya ma ahan wararka, laakiin sidoo kale taxanaha telefishanka. Dhibaatadu waxay tahay in xilliyada badankood, gaar ahaan taxanaha telefishanka, Waxa Bitcoins runtii yihiin iyo waxa aan ku qaban karno iyaga ayaa qalloocan. Seeraar waa lacag dalwad ah Ma maamusho hay'ad la oggol yahay, laguma kaydiyo bangiyada, lama ogaan karo marar badanna, gaar ahaan maalmihiisii ​​hore, waxaa lala xiriiriyay falal sharci darro ah oo la xiriira iibinta daroogada iyo hubka (Wadada Silk way dhawaaqi doontaa) kuligeenna caan ku nahay). Laakiin haddii aan wax yar ka sii qodno waxa lacagtan cusub runti tahay, waxaan arki karnaa inay noqon karto, mustaqbalka fog, lacag si weyn ay u isticmaalaan dadka isticmaala.
Intaas waxaa sii dheer, Bitcoin waxay la kulantay koror cajiib ah qiimaheeda, waana sababta ay u noqotay fursad maalgashi oo aad u wanaagsan kuwa doonaya inay si aad ah ugu soo noqdaan lacagtooda. € 5.000, € 10.000, € 200.000, ... waxaa jira xitaa xirfadlayaal ku xeel dheer waaxda oo saadaalinaya mustaqbal meesha laga sameyn doono Bitcoin waxay noqon kartaa qiimo dhan hal milyan oo euro. Iyagoo wajahaya sheegashooyinka noocaas ah, dad badan ayaa galaya suuqa Bitcoin maalgashadayaal.
Waxaad rabtaa maalgeli Bitcoin? Waxaan ku siineynaa 10 $ BILAASH Seeraar adoo gujinaya halkan
1 Waa maxay Bitcoin?
2 Ayaa abuuray Bitcoin?
3 Waa imisa qiimaha Bitcoin?
4 Halkeen ka iibsan karaa Bitcoins?
5 Sida loo qodo Bitcoins
6 Ayaa xukuma Bitcoins?
7 Faa'iidooyinka Bitcoins
8 Faa'iido darrooyinka Bitcoins
Sida aan kor uga faallooday, Bitcoin waa lacag dijitaal ah, ma laha qoraalo ama shilimaad jireed oo ay ku fulinayaan macaamil ganacsi. Bitcoins-ka waxaa lagu kaydiyaa boorsooyin gacmeedyo aan ka bixin karno isla markiiba internetka. Marka laga tago adeegsiga caadiga ah ee ay la xiriirtay, hadda Microsoft, barnaamijka ciyaarta Steam, Las Vegas casinos iyo xitaa kooxaha kubbadda koleyga ee NBA waxay aqbalaan lacagtan dijitaalka ah oo ah nooc lacag bixin ah, laakiin iyagu ma aha kuwa keliya tan iyo tirada ganacsiyada waxaana sii kordhaya shirkadaha waaweyn ee bilaabay inay doorbidaan adeegsiga lacagtaan.
$ 10 BILAASH ka hel Bitcoin adoo gujinaya halkan
Marka la soo koobo waxaan dhihi karnaa taas Bitcoin waa lacag dijitaal ah, baahsan oo adeegsade adeegsade ah. Aqoon darrida ka jirta lacagtan cusub ee aysan gacanta ku haynin hay'ad maaliyadeed, waddamada qaar waxay bilaabeen inay xayiraan degellada u oggolaanaya in lagu shaqeeyo lacagtaan, sida Ruushka, Vietnam, Indonesia. Si kastaba ha noqotee, waddamo kale sida Mareykanka iyo Brazil waxay horeyba u bixiyeen ATM-yada halkaas oo aan si toos ah uga iibsan karno Bitcoins adoo ku xiraya boorsadayada.
Waxaa jira cryptocurrencies kale sida Ether, Litecoin iyo Ripple laakiin runtu waxay tahay in Bitcoin maanta tahay midka kaliya ee loo yaqaan 'cryptocurrency' oo leh muhiimad iyo miisaan adduunka oo dhan.
Ayaa abuuray Bitcoin?
In kasta oo aysan jirin caddayn dhab ah oo ku saabsan cidda abuuray waxay ahayd, inta badan raadinta amaahda Satoshi Nakamoto Sannadkii 2009, in kasta oo fikradii ugu horreysay ee abuureysa lacag baahsan oo aan la magacaabin la helay 1998-kii, oo ku taal liiska boostada ee ay abuurtay Wei Dai. Satishi wuxuu sameeyay tijaabooyinkii ugu horreeyay ee hawlgalka fikradda Bitcoin ee liiska boostada ee jaamacadiisa, inkasta oo waxyar uun kadib markuu ka tagay mashruuca, uu ka tagay badwaynta shakiga wuxuuna keenay faham la'aan fahamka isha furan ee Bitcoin salka ku haysa iyo adeegga dhabta ah.
2016, Australiyaanka Craig Wright, wuxuu ku andacooday inuu ahaa abuuraha lacagta dhijitaalka ah oo uu weheliyo Dave Kleiman (wuxuu dhintay sanadkii 2013) isagoo sheegaya in magaca Satoshi Nakamoto uu ahaa mid been abuur ah oo ay labaduba abuureen si qarsoodi ah loo qariyo. Craig wuxuu soo bandhigay taxane furayaal gaar ah oo laxiriira shilimaadkii ugu horeeyay ee uu abuuray Nakamoto, laakiin waxay umuuqataa in macluumaadka uu kashifay si uu u cadeeyo inuu ahaa abuuraha uusan kufilanayn hadana magaca abuuraha Bitcoins wali hawada ayuu kujiraa .
Waa imisa qiimaha Bitcoin?
Sanadkii la soo dhaafey, qiimaha Bitcoin wuxuu cirka isku shareeray 500%, waqtiga qorista maqaalkan, qiimaha Bitcoin waa qiyaastii $ 2.300. In kasta oo ay kor u kacday lacagtu sannadihii la soo dhaafay, qaar badan ayaa wali ka shakisan markay tahay maalgashiga lacagtan dijitaalka ah, iyada oo loo diiwaangelinayo inay tahay saamayn xumbo oo goor dhow ama goor dambe qarxi doonta, iyadoo la qaadan doono lacagtii dhammaan isticmaaleyaashii waqtiga iyo lacagta geliyay lacagtan.
Ma rabtaa inaad maal gashato Bitcoin?
Halkan guji si aad u iibsato Bitcoin
Hal dhibic oo ka mid ah nimcadeeda ayaa ah taas kuma tiirsana jidh kasta oo nidaamiya oo xakamayn kara, si markaa ay unoqdaan isticmaaleyaasha iyo macdan qodayaasha, oo ay weheliso tirada hawlgallada maalinlaha ah la qabto, ee saamayn ku yeelan kara kor u kaca ama dhicitaanka qiimahooda. Codsiyada kala duwan ama bogagga shabakadda ee noo oggolaanaya inaan wax iibsanno oo iibino Bitcoins waxay na siinayaan sicirka waqtiga saxda ah ee aan dooneyno inaan ku qabanno macaamilka si aan u ogaanno mar walba tirada Bitcoins ee aan dooneyno inaan helno. Haddii aad rabto inaad iibsato Bitcoins, Taladayada ayaa ah inaad isticmaasho madal adag oo aamin ah sida Coinbase. Halkan guji inaad akoon ka furato Coinbase oo aad iibsato Bitcoins-kaaga ugu horreeya.
Halkeen ka iibsan karaa Bitcoins?
In kasta oo qiimaha Bitcoins uu si weyn u kala duwanaan karo sannad, in ka badan iyo ka badan isticmaaleyaasha daneynaya inay maalgashadaan cryptocurrency. Waqtigan xaadirka ah internetka waxaan ka heli karnaa tiro badan oo bogag internet ah oo noo oggolaanaya inaan maalgashi ku sameyno Bitcoins. Laakiin dhammaan kuwa aan ka heli karno, qaar badan oo ka mid ah waxay rabaan inay sii hayaan lacagteenna iyada oo aan waxna lagu soo celin, waxaan muujineynaa Coinbase, mid ka mid ah kuwa ugu horreeya ee ku sharaddeeya lacagtan aan xuddun u ahayn oo aan la garanayn inta badan bilowgii.
Si aad u awooddo iibso Bitcoins iyada oo loo marayo Coinbase waa inaan nahay kala soo bax barnaamijyada kala duwan ee nidaamka hawlgalka: macruufka ama Android. Mar alla markii aan isdiiwaan gelinno oo aan dhammaystirno dhowr tallaabo oo xaqiijin oo fudud ah, waxaan buuxinnaa xogta akoonkeenna bangiga waxaanan bilaabi karnaa iibsashada Bitcoins, Bitcoins oo lagu keydin doono boorsada ay adeeggan na siiso, taas oo aan ka bixin karno lacagaha kuwa kale ee isticmaalaya tan. qadaadiic ama si fudud u kaydi ilaa qiimaha suuqoodu ka sarreeyo kan hadda socda.
Ha ka fikirin laba jeer oo $ 10 BILAASH ku hel Bitcoin adoo gujinaya halkan
Isla codsigii waxaan si dhakhso ah u heli karnaa qiimaha Bitcoin waqtiga wax iibsiga ama iibinta, si aannaan baahi ugu qabin in aan la tashanno bogag kale intaan hawsha fulin. Sida caadiga ah, qiimaha Bitcoin waxaa lagu muujiyaa doollar, sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad ku iibsato lacagtan doollar oo aan lagu iibsan euro, haddii kale waxaan dooneynaa inaan lacag ku weyno isbeddelada uu sameeyay bangiga si loo fuliyo macaamilka.
Sida loo qodo Bitcoins
Si aad u bilowdo inaad madaxaaga u geliso adduunka Bitcoins waxaad u baahan tahay ugu horreyntii xiriirka internetka, kombiyuutar awood badan iyo barnaamij gaar ah. Suuqa waxaan ka heli karnaa fargeeto kala duwan oo ka mid ah dalabka isha furan ee loo adeegsado in lagu kasbado Bitcoins, dhammaantood waxay kuxiran yihiin midka ku habboon baahidaada. Nidaamka loo maro macdanta Bitcoins waa mid fudud, maadaama kooxdaada ay mas'uul ka yihiin, oo ay la socdaan kumanaan kombiyuutarro kale ah, si loo farsameeyo macaamillada laga sameeyo suuqa isla markaana loo soo ururiyo Bitcoins. Sida iska cad kooxaha badan ee aad shaqeyso, Bitcoins badan ayaad heli kartaa, in kasta oo wax waliba aysan u qurux badnayn sida ay u egyihiin.
Marka uu jiro tartan badan, fursadaha kooxdaada ee loo adeegsado inay sameeyaan macaamil ganacsi hoos udhaca markaa heerka macaashka ayaa yaraaday. Qofna ma xakamayn karo nidaamka si loo kordhiyo dakhliga Bitcoins, waxa kaliya ee la samayn karo waa in la abuuro beero leh tiro aad u tiro badan oo kombuyuutarro ah oo ku xiran shabakadda, taas oo iyaduna waxay u baahan tahay kharash aad u fara badan oo iftiin ah, oo aan la tirin kharashka qalabka, oo waa inuu noqdaa mid xoog badan.
Xawaaraha ay ku abuureen waa la dhimay maadaama Bitcoins la soo saaray, ilaa tirada 21 milyan laga gaarayo, xilligaas oo aan la soo saari karin lacagaha elektaroonigga ah ee noocan ah. Laakiin si loo gaaro xaddigaas weli waqti badan ayaa harsan.
Ikhtiyaar kale oo loo maro macdanta 'bitcoins' sida ugu fudud ayaa ah in la kireeyo nidaam Bitcoins daruuraha macdanta.
Ayaa xukuma Bitcoins?
Dhibaatada ay metelaan Bitcoins ee dalalka iyo bangiyada waaweyn ayaa ah inaysan jirin hay'ad mas'uul ka ah xakamaynta wax kasta oo la xiriira lacagtaan, waa wax iska cad oo aan ka dhigayn wax lagu qoslo, gaar ahaan in muddo ah qaybtaan ay Bitcoin ka bilaabmayso inay noqoto lacag guud, inkasta oo wali waxaa jira sanado badan oo ka harsan ka hor intaanay ahayn bedel dhab ah.
Coinbase, Blockchain.info iyo BitStamp ayaa mas'uul ka ah bixinta kaabayaasha Bitcoin, waa noodhadh u shaqeeya faa iidada, markaa had iyo jeer waxay u guuraan danahooda gaarka ah, cidkasta oo u soo bandhigta lacag badan, laakiin ma ahan kuwa iyagu ku wareejiyay wareegga, hawshaasi waxay ku dhacaysaa macdan qodayaasha, dadka ku mahadsan software-ka gaarka ah iyo awoodda kombiyuutarkaaga / kombiyuutarku wuxuu noqon karaa macdanta iyo kasbashada Bitcoins.
AmnigaMaaddaama isticmaaleyaashu ay si buuxda gacanta ugu hayaan dhammaan macaamilladooda, cidina kama dallaci karto koonto sida kaararka deynta ama xisaabaadka hubinta.
Hufan. Dhammaan macluumaadka la xiriira Bitcoins waxaa si guud looga heli karaa iyada oo loo marayo blockchains, diiwaanka halkaas oo dhammaan macluumaadka la xiriira lacagtaan laga heli karo, diiwaanka aan wax laga beddeli karin ama aan la maareyn karin.
Guddiyada aan jirin. Bangiyadu waxay ku nool yihiin guddiyada ay naga qaadaan marka lagu daro inay ku ciyaaraan lacagteenna. Lacag bixinta aan ku sameeyno Bitcoins, kiisaska intooda badan gebi ahaanba waa bilaash maaddaama aysan jirin dhexdhexaadiye sameeya, in kasta oo mararka qaarkood, iyadoo ku xiran nooca adeegga aan dooneyno inaan bixino, guddiga qaar ayaa laga yaabaa in lagu dabaqo, laakiin xaalado aad u gaar ah.
Soomi. Thanks to Bitcoins waxaan u diri karnaa oo aan u heli karnaa lacag si dhaqso leh isla markiiba meel kasta oo adduunka ah.
Faa'iido darrooyinka Bitcoins
Sida iska cad ma aha oo kaliya adduunka, iyo in yar oo ka mid ah ururada maaliyadeed, ayaa taageersan in la shaaciyo lacagtaan, badanaa maxaa yeelay ma lahan wado ay ku gaarto oo ay ku xakameyso.
Deganaansho. Tan iyo markii ay dhalatay, Bitcoins waxay gaareen tirooyin kor u dhaafaya kun doolar halkii cutub, maalmo kadibna waxay leeyihiin qiime dhowr boqol oo doolar ah. Dhammaan waxay kuxirantahay howlaha iyo mugga Bitcoins ee dhaqaaqaya waqtigaas.
Caannimada. Xaqiiqdii haddii aad weydiiso qof caan ku ah bitcoins-ka oo aan ku badnayn tikniyoolajiyadda, waxay kuu sheegi doonaan haddii aad ka hadlayso tamar cabitaan ama wax la mid ah. Inkasta oo ay sii kordhayaan ganacsiyada iyo shirkadaha waaweyni inay bilaabayaan inay taageeraan lacagtaan, haddana waxaa jira waddo dheer oo loo maro ka hor intaanay noqon lacagta maalinlaha ah ee caadiga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Tiknoolaji » Bitcoin, waa maxay, sidee u shaqeysaa iyo meesha laga iibsado Bitcoins
Cryptocurrencies waxay ku saleysan yihiin nidaamka "peer to peer" (laga bilaabo isticmaale ilaa isticmaale) taas oo noo ogolaatay inaan kala tagno dhibaatooyinka qaababkii hore ee lacag bixinta: baahida loo qabo dhinac saddexaad.
Kahor soo-saarista lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies', markii aad dooneysay inaad lacag ku bixiso khadka tooska ah, waxaad u baahnayd inaad miciinsato meherado ay ka mid yihiin Bangiyada, Paypal, Neteller, ... iwm si aad lacag u bixiso.
Iyada oo loo yaqaan 'Cryptocurrency Bitcoin' tan ayaa is bedeshay tan iyo markii aan loo baahnayn in jidh laga yeesho lacagtan bilaashka ah, iyada oo ah shabakadda lafteeda ay soo saaraan adeegsadayaasha (kumanaan kumbuyuutar oo adduunka ah) kuwaas oo hubiya inay fuliyaan kormeerka, xakamaynta iyo diiwaangelinta macaamil ganacsi.
Ku jawaab BITCOIN
Mudane Craig Wright, kani maahan Satoshi. Ninkani wuxuu ahaa mid si shil ah u qaata mid ka mid ah dirawalada adag ee aan isticmaali jiray.
Macaamilka 'Finney Transaction', waa macaamil ganacsi oo aan ka sameeyay kumbuyuutarkeyga, Core 2 Duo oo leh 2gb wan iyo 80 disk adag, markii aan ku dhacay 9-xaashi Pdf ee Bitcoin, oo ay weheliso isbarbardhigga sharciga Moore, illaa laptop-kayga .
Saciid Macaamiil ayaa laga sameeyay kumbuyuutarkeyga oo loo yaqaan 'Acer Aspire laptop', iyo 2,5-ka adag ee laptop-ka la sheegay ayaa loo diray, cilad darteed. Xiriirka aan la leeyahay ninkan ma uusan ka badneyn ganacsi, ma aqaan isaga, mana aqaano waxa uu damacsan yahay, iyo ujeeddada arrintan oo dhan.
Xawaaladda Finney waxay ahayd tijaabadii ugu horreysay ee aan sameeyay, iyada oo loo marayo ip iyo dekedda 8333 lagu guuleystay. Aniga iyo Finney waxaan qarinay gudbinta feylka iyo macaamil ganacsi si aan kulan ugu qabanqaabino.
Tani waa mid ka mid ah runta iyo dahsoon ee aan maanta kuu kashifay.
Maanta, waxaan noqonayaa qarsoodi, laakiin markan si ka duwan sanadihii la soo dhaafay, aad ayaan u soo dhaweynayaa hadalka.
Ku jawaab Satoshi Nakamoto
MUHIIM: gudaha Isbaanishka, isticmaal LiviaCoins.com si aad u iibsato ama u iibiso bitcoins. Waa dhakhso oo fudud
Jawaab Jaime Noble